प्याजका यी अद्भूत फाइदा तपाईंलाई थाहा छ ? « Mayadevi Online News Portal
प्याजका यी अद्भूत फाइदा तपाईंलाई थाहा छ ?
प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७७ शनिबार १३:४०
मानिसहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिन्छन् । भोजनमध्ये प्याज पनि एक हो जो नेपाल, भारत लगायतका देशमा आलुपछि बढी प्रयोग गरिन खाद्य पदार्थमा पर्छ । लगभग सबैजसो भान्सामा प्याजको प्रयोग हुन्छ ।
प्याजका कयौं गुणहरू रहेका छन् । यो एक बेजोड खालको औषधि पनि हो । प्याजको प्रयोग धेरै रोगको उपचारको लागि हुने गरेको छ ।
यसको सेवनले इम्यसनिटी पावर बढाउछ । अनुहारमा नरमपन, आँखाको ज्योति बढ्छ । प्याजमा कयौं पोषक तत्व हुन्छ । जस्तो भिटामिन सी, फलामजस्ता बहुमुल्य खनिज पदार्थ प्याजमा पाइन्छ । प्याजमा लगभग ११ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ ।
गर्मीमा तातो हावा चल्छ जसले लू लाग्ने सम्भावना हुन्छ । तर यसको समस्या आएपछि बिरामी पर्ने निश्चित छ । यस्तो स्थितिमा काँचो प्याज अचूक औषधि हो । काँचो प्याजको रसले पैतालमा र हातको हत्केलामा दल्नु फाइदा जनक हुन्छ । यसका साथै जिउमा दल्दा पनि फाइदा हुन्छ ।
पथरीको समस्या छ भने बिहान खाली पेट दुई चम्चा काँचो प्याजको रस पिउँदा फाइदा पुग्छ । प्याजको रसलाई चिनीसँग घोले स्टोन बनाएर पिउँदा स्टोन हटाउनलाई फाइदा पुग्छ ।
गर्मीमा नखानुस् यस्ता खानेकुरा, गर्छ स्वास्थ्यलाई हानि
एजेन्सी ।गर्मी लागेको छ र अब खानपिनमा निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने
काठमाडौं ।रंगहरूको पर्व होली नजिकिएको छ । रंगसंग प्रेम र
मधुमेहका रोगीले खान नहुने १० खाना
एजेन्सी ।रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकभन्दा बढी देखा पर्नुलाई मधुमेह भनिन्छ
महिनावारी हुँदा आँखाबाट रगत बग्यो
एजेन्सी ।२५ वर्षीया एक युवतीको एक दुर्लभ रोगका कारण महिनावारी